Friday, 20 Apr, 2018 12:06 PM
एक दिन दिउँसो कलंकीको होटलमा काम विशेषले पुगेको थिएँ । एक महिला निस्किइन्, होटल साहुले .... खोइ त भनेर सोधे । सुतिरहेको छ भन्दै होटलबाट बाहिरिइन् । अर्को फोन आएको भन्दै । होटल साहुसँग सोधखोज गरें । विवाहित महिला नै हुन्, श्रीमान् दिउँसो कार्यालय जाँदा रहेछन् । ती महिला दिउँसो कन्ट्याक्टमा हिँड्दी रहिछन् । मैले होटल साहुलाई सोधें– यसरी हिंडेको लोग्नेले थाहा पाउँदैनन् ? जवाफ आयो –छाप लागेको हुन्छ र ? म ट्वाँ । त्यही दिन २०/२० केही जोडी बाहिरिए, त्यही होटलबाट ।